इजी वन टच वरिष्ठ भिडियो फोन - Konnekt
एक टच भिडियो फोन
यो Konnekt वन टच भिडियो फोनसँग एक उन्नत टच-स्क्रीन छ जसले तपाईंलाई एक एकल बटनको टचको साथ कल गर्न दिन्छ!
प्रत्येक कल बटन ठूलो छ, स्पष्ट र पढ्न सजिलो छ, र तपाईको छनौट गरीएको सम्पर्कहरु मध्ये एक समावेश गर्दछ। कल बटनलाई नाम दिन र चाहानु हुने ब्यबस्था मिलाउन सकिन्छ - उदाहरण को लागी, यदि तपाई संग सम्पर्क छ "Amanda Lee-Ferguson", तपाईले बटनलाई "Aunt Amy", "ठूली बहिनी", "म्यान्डी", वा केहि पनि नाम दिन सक्नुहुन्छ। अर्को भाषामा जस्तै "阿曼达"।
एमीलाई कल गर्न, तपाई केवल "एमी" बटन छुनुहोस्। कुनै नम्बरहरू सम्झन, कुनै मेनुहरू, कुनै आईकनहरू छैनन्। हाम्रो वन टच भिडियो फोन छिटो र सजिलो छ।
प्रशिक्षण आवश्यक छैन
यो Konnekt भिडिओफोनलाई कुनै प्रशिक्षण आवश्यक पर्दैन। तपाईको नियमित फोन भन्दा यो प्रयोग गर्न सजिलो छ। त्यहाँ कुनै किबोर्ड, माउस वा स्टाइलस छैन। योसँग कुनै लगइन, पासवर्ड वा प्रोग्रामहरू छैनन्। त्यहाँ लिन को लागी एक हेन्डसेट छैन वा लगाउन को लागी हेडसेट छैन। तपाईंलाई चाहिएको सबै औंला हो।
त्यहाँ मेनु पनि छैन। त्यो कति सरल छ!
ट्याब्लेट वा ल्यापटपको विपरीत, यसलाई खोल्न वा चार्ज गर्न आवश्यक पर्दैन, चालु गर्नको लागि कुनै प्रोग्रामहरू हुँदैन, यसलाई गलत ठाउँमा राख्न सकिदैन, यो कमजोर Wi-Fi कोठामा लगिदैन, र त्यहाँ हराउनको लागि फ्ल्याट वा कष्टकर रिमोटहरू बन्न ब्याट्रीहरू छैनन्।
आश्चर्यजनक रूपमा सरल, जवाफको लागि एक छुनुहोस्
जब तपाइँको कुनै एक सम्पर्कले तपाइँलाई कल गर्दछ, Konnekt भिडियोफोन ठूलो आवाजमा चर्को स्वरमा बज्यो। स्क्रिनले तपाईंको कलरको नाम ठूला अक्षरहरूमा देखाउँदछ जुन टाढाबाट पढ्न सजिलो हुन्छ, ताकि तपाईंलाई कसले बोलाउदै छ भन्ने कुरा सँधै थाहा हुन्छ।
कललाई जवाफ दिन, तपाईं केवल ठूला हरियो ANSWER बटन छुनुहोस्। यदि तपाईंले कलरलाई उत्तर नदिने निर्णय गर्नुभयो भने, तपाईं या त यसलाई घण्टी दिन सक्नुहुन्छ वा तपाईं ठूलो रातो REJECT बटन थिच्न सक्नुहुन्छ।
Konnekt'वन टच भिडियो फोन' होशियारीपूर्वक अज्ञात कलरहरूको कलहरू रोक्दछ, त्यसैले तपाईं कहिले टेलिमार्केटरहरू, जालसाजी वा “गलत नम्बर” कलहरू द्वारा व्याकुल वा जागृत हुनुको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। तपाइँले हामीलाई चयनित ज्ञात सम्पर्कहरूबाट आगमन कलहरू रोक्नको लागि पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईको साथी छ भने कहिलेकाँही तपाईलाई विचलित पार्छ वा निदाएको बेला कल गर्दछ।
यो Konnekt भिडियोफोन पाठ तपाईको मनपर्ने भाषामा अनुकूलित गर्न सकिन्छ। तपाईंको कल बटनले विभिन्न भाषाहरूबाट क्यारेक्टरहरू पनि मिक्स गर्न सक्दछ।
प्रयोग गर्न को लागी आश्चर्यजनक सरल
कल गर्न वा जवाफ दिन एक टच
ठुलो, पढ्न सजिलो कल बटनहरू
सम्झनको लागि कुनै संख्या छैन
तपाईंको भाषामा अनुकूलित
यसले वृद्धहरूलाई कसरी मद्दत गर्दछ?
यो Konnekt भिडिओफोन ठूलो र ठूलो छ, र तपाईले सुन्न सक्नुहुनेछ धेरै कोठाबाट टाढा। टेलिमार्केटरहरू र जालसाजीहरू रोकिएका छन्। मनोनीत हेरविचारकर्ताहरूलाई चिन्ता कम गर्नका लागि स्वत: जवाफ दिन सकिन्छ। हेर्नुहोस् वरिष्ठ आवेदन।